Warqadda Cilmi Baarista ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Cilmi-baarista Tacliinta ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Tilmaam Ku Saabsan Xulashada Adeegga Qorista Warqadda Cilmi-baarista ee Xaqa ah ee Adeegga Qorista Resume
Ii Qor Waraaqo Cilmi Baadhiseed. Ujeeddada qodobkaan ayaa ah in lagu siiyo warqad cilmi baaris aqooneed qoran oo caadiyan kuu ah oo bilaash ah baahiyahaaga Waxaan ku siin doonaa xoogaa talo soo jeedin ah oo ku saabsan sida aad isugu diyaarin karto shaqadan noocan ah. Qaado dhammaan maaddooyinka, mowduucyada, heerarka dhib intaadan bilaabin qorista.
Haddii aad qorshe ka leedahay qoritaanka warqad aqooneed, markaa ha iloobin adeegyada qoraaga. Qoritaanka warqad waxay u baahan tahay wax ka badan kaliya waqti badan oo aad qaadatid iyo dadaal. Si aanad waqti badan iyo tamar ugu lumin, hel caawimaad qoraa. Waa mid ka mid ah go'aannada ugu wanaagsan ee aad waligaa qaadan doonto.
Si aad u hesho natiijada ugu fiican, raadi qoraa ku takhasusay aagga aad xiisaynayso. Haddii aad ganacsi ku jirto, adeegga qorista maqaalku waa inuu awoodaa inuu qoro qormo ganacsi. Haddii aad aqoonyahan tahay, qoraa tacliimeed waa inuu awoodaa inuu qoro warqad sheeko. Dabcan, noocyada kala duwan ee qoraalka tacliinta waxay u baahan yihiin qoraayo kala duwan. Aqoonyahan ku takhasusay cilmiga siyaasadda wuxuu u baahan doonaa qoraa ka duwan kan ku takhasusay waxbarashada.
Nooca qormada tacliimeed sidoo kale wey ku kala duwan tahay hadba qoraha. Waraaqaha ereyga, waxaa jira qaab gaar ah oo la raaco. Si aad u barato qaabka saxda ah ee warqaddaada ereyga, weydii qoraa ku saabsan. Ha ka welwelin inaad saxdo markii ugu horreysay. Weydii su'aalo inta ugu badan ee aad kari karto ah si laguu hago si aad u soo saarto dukumiinti tacliimeed oo tayo sare leh.
Markaad u dooratid qoraaga waraaqdaada waxbarasho, isaga / iyadu waxay ku siin doontaa xoogaa talo bixin ah. Waad raaci kartaa talooyinkaas ama aad adigu iskaa wax u qaban karto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku hagto qoraa gaar ah, markaa waxaad awoodi doontaa inaad dhammaystirto warqadda si ka dhakhso badan haddii aad adigu sameyneyso naftaada. Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inaad xitaa ufududaan maxaa yeelay waqtiga ayaa loo qoondeeyay inaad si dhakhso leh u buuxiso warqadda.
Si aad u hubiso inaad ugu dambayn doonto warqad tayo wanaagsan leh, shaqaalee qof hore u soo qorayay qorista aqoonta. Sidan, waxaa laguu ballan qaadayaa in warqadda si habboon loo qaban doono. Dabcan aad ayey ugafiican tahay inaad warqadaada kaligaa qortid, laakiin hadaadan qibrad u laheyn qoritaanka tacliinta, markaa waa inaad runtii shaqaaleeysid qof.
Haddaba, aan u gudubno mawduuca buugga. Buug-gacmeedka ayaa asal ahaan ah shaqo soo bandhigaysa dhammaan xaqiiqooyinka la baaray iyo daraasad ku saabsan mawduuc gaar ah oo si dhammaystiran oo si wanaagsan loo qoray. Warqad cilmi baaris ah waa inay had iyo jeer ku bilowdaa hordhac, si kastaba ha noqotee, ka hor intaanad u gudbin hilibka qoraalkaaga qorista, hordhaca shaqada aad soo bandhigi doonto dhamaadka mashruuca.
Haddii aad doorato adeegga qorista warqadda cilmi-baarista, markaa waxaad ku bilaabi kartaa hordhaca ka dibna halkaas ayaad uga shaqeyn doontaa. Hubso in adeegga aad kireysan doontaa uu yahay mid lagu kalsoonaan karo marka la qoro hordhaca warqadda. Habka ugu fiican ee tan lagu go'aamin karo waa iyadoo laga raadinayo markhaatiyo macaamiisha kale. Haddii adeeggu horey u lahaa qorayaal, markaa waxaad sidoo kale weydiin kartaa khibradooda si loo go'aamiyo adeegga adiga kuugu habboon. Intaas waxaa dheer, qofka qormada kuu qoraya waa inuu awood u leeyahay inuu fahmo waxaad rabto inaad ku gaarto qormadaada.
Qoritaanka waa in la abaabulaa. Tani waxay ka dhigan tahay in qayb kasta oo ka mid ah mashruuca ay tahay in la qoro, dib loo akhriyo, dib loo eego, loona ilaaliyo siday u kala horreeyaan. Tani waa si akhristaha uu awood ugu yeesho inuu si fudud u raaco amarka qoraalka qoran. Haddii ay jiraan qaybo maqan, markaa waa in dib loo soo celiyaa intaan la sii wadin dukumintiga intiisa kale. Waa inaad la tashataa adeegga qoraalka qoraalka ee Boqortooyada Midowday (UK) ee aad ka kireyn doonto qaabeynta iyo qaababka kala duwan ee loo adeegsan doono si loo gaaro nidaamkaas oo kale.
Adeegyada qorista waraaqaha cilmibaarista tacliinta waa inay sidoo kale bixiyaan adeegyo tafatirka qormada. Markaad dooranayso adeeg aad kireysato, wax ka weydii siyaabaha kala duwan ee ay wax uga beddelaan waxyaabaha ku jira. Aad ayey muhiim u tahay inay wax ku saxaan hadba sida aad doorbideyso iyo qaabkaaga. Dad kala duwan ayaa doorbidid kala duwan leh marka ay timaado qaabka. Way fiicnaan laheyd haddii aad weydiisato shaqooyinka tifaftirka muunad ka hor intaadan degin adeeg gaar ah.
Adeegyada qorista cilmi-baarista tacliimeed waa inay ka jawaabaan su'aalahaaga si ku filan. Waa inay awoodaan inay wax ka qabtaan wixii walaac ah ama weydiimo ah ee aad qabtid. Iyaguna waa inay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan su'aalahaaga oo ay ku siiyaan talo ku saabsan caawimaadda aasaasiga ah ee shaqada guriga. Adeegyadan, waxaad awoodi doontaa inaad si fudud uga gudubto shaqadaada iskuulka.